၂၀၁၆ Hollywood ရုံတင်ကားများနဲ့ ရုံတင်ရက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၂၀၁၆ Hollywood ရုံတင်ကားများနဲ့ ရုံတင်ရက်များ
Posted by အောင် မိုးသူ on Jan 19, 2016 in Creative Writing, Movies/TV | 13 comments
Kevin Hart ရဲ့ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ဟာသဇာတ်ကားတစ်ကားပါ.
Ice Cube ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို မတွေ့ရတာ ကြာနေတဲ့ fans တွေလည်း အကြိုက်တွေ့ဦးမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ.
တစ်ချိန်ကတော့ ကွန်ဖူးသိုင်းပညာတွေ သင်ယူတဲ့ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရောက်ရှိလာတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သူများတွေကို ပညာဖြန့်ဝေပေးရတဲ့ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့အခါ..
အူလိမ့်နေအောင် ရယ်ရတဲ့ Ben Stiller ရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ စုံထောက် စွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းပါ.
နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာမှာ ပြန်လည် ထွက်ရှိလာပေမယ့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြင်ဆင်ထားတဲ့အပြင် Justin Bieber တို့လို နာမည်ကျော်တွေရဲ့ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်မှုကိုပါ ရှုစားကြရမှာပါ.
ဒါရိုက်တာကြီး Ang Lee ရဲ့ ပွဲဦးထွက် အော်စကာဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဂန္ဒ၀င် ဓားသိုင်းဇာတ်ကားကြီးရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာမှာ ထပ်မံထွက်ရှိလာမယ့် နောက်ဆက်တွဲကားပါ.
မူရင်းမင်းသမီး Michelle Yeoh ပြန်လည်ပါဝင်မှာမို့ အရင်ကားရဲ့ ခမ်းနားမှုတွေကို လိုက်မီနိုင်မလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်နိုင်ဦးမှာပါ.
‘Olympus Has Fallen’ မှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတတစ်ယောက် လန်ဒန်မြို့ကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း အန္တရာယ်တွေက ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာပါတယ်.
အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Thriller ဇာတ်ကားနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်ကလည်း ပထမဇာတ်ကားလိုပဲ ထိုင်ရာကမထနိုင်အောင် စွဲဆောင်နိုင်ဦးမှာပါပဲ.
Divergent Series တွေထဲက နောက်ဆုံး စာအုပ်ကို (၂) ပိုင်းခွဲပြီး ရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာ ပထမဆုံး အပိုင်းပါ.
ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို တစ်စစီ ဖော်ထုတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
မထင်မှတ်ပဲ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ ဟာသ ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပါ.
ဂရိမိသားစုဝင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအပြီးမှာတော့ ခုတစ်ခါ သမီးလေးတစ်ယောက်ထွန်းကားပြီး သူတို့ရိုးရာနဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းပေါင်းစပ်ပြီး ချစ်စရာ family ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ.
ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံး စောင့်စားနေကြတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ Superman နဲ့ Batman တို့ရဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကို ရှုစားကြရမယ့်အပြင်
ရပ်ကွက်ထဲက ဆံပင်ညပ်ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ဟာ ဖိအားမှန်သမျှ စီးပွားရေး ဈေးကွက် အနိမ့်အမြင့်မှန်သမျှကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရုန်းကန်ခဲ့ပုံတွေပါ.
Nicki Minaj ရဲ့ ဟာသမြောက်တဲ့ သဘာဝ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ အပြင် Rapper Ice Cube ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို လွမ်းနေတဲ့ Fans တွေ အနေနဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ သူ့ကား (၂) ကားတောင် အားပေးလို့ရပါပြီ
Comic Fans တွေ သိထားပြီးတာထက် ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ အပိုထပ်ဆောင်း မပြောနိုင်လောက်အောင်ကို လူစိတ်ဝင်စားမှု ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
မင်းသား Zac Efron နဲ့ ဟာသမင်းသား Seth Rogen တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကြားက ခွက်တိုးခွက်လန် ဟာသတွေကို မ၀နိုင်သေးတဲ့ Movie Fan တွေအတွက် ထပ်ရောက်လာပါဦးမယ်
တစ်ချိန်က သူမကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ Mad Hatter တစ်ယောက် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေပြီလို့ သိလိုက်ရချိန်မှာ Alice တစ်ယောက် ထူးထွေဆန်းပြားလှတဲ့ Wonderland ထဲကို တစ်ကြိမ် ပြန်သွားရပါဦးမယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ TMNT4ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ TMNT5မှာ Arrow ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက မင်းသား Stephen Amell တစ်ယောက် ပါဝင်ထားတဲ့အပြင် ပရိသတ်အသည်းစွဲ Megan Fox လည်း ဆက်လက် သရုပ်ဆောင်ဦးမှာမို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ.
ရှေ့ကထွက်ရှိထားသမျှ လိပ်နင်ဂျာ ရုပ်ရှင်ကား (၄) ကားစလုံးလည်း Naytharland မှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ.
2014 ရဲ့ Surprise Hit ရဲ့ နောက်ဆုံးတွဲမှာ မင်းသမီး Isler Fisher တစ်ယောက် မပါတော့ပေမယ့် ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေ အများကြီး ပါဝင်လာတာမို့ ပိုတောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဦးမှာ အသေအချာပါပဲ.
Daniel Radcliffe, Jay Chou တို့ အပါအ၀င် သရုပ်ဆောင် အသစ်၊ ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ပိတ်ကားပေါ်မှာ မြင်ရဖို့ကတော့ အတော်လေး စောင့်စားကြရဦးမှာပါ.
တစ်ချိန်က မင်းသားကြီး Bill Murray ရဲ့ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှု ရခဲ့တဲ့ ဟာသစွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းကို ယနေ့ခေတ် နာမည်ကျော် အမျိုးသမီး ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အသက်ပြန်သွင်းထားတဲ့အခါ ထူးခြားမှုကို ရသသစ်တွေနဲ့ ခံစားကြရမှာပါ.
Star Trek Reboot ရဲ့ တတိယမြောက် installment ပါ.
တစ်ကားထက် တစ်ကား ပိုပြီး ကြီးကျယ်ခန်းနားအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့မို့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စွန့်စားခန်း ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာဦးမှာပါပဲ
Ice Age ရဲ့ ချစ်စရာ ဇာတ်ကောင်လေးတွေကို ထပ်မံမျှော်လင့်နေတဲ့ Fans တွေအတွက် ကွက်တိဖြစ်ဦးမှာပါ
ခုချိန်ထိတော့ မူရင်း Jason Bourne အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသား MAtt Damon ပြန်လည် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကလွဲရင် ဘာသတင်းမှ တိတိပပ မသိရသေးပေမယ့် Fans တွေကတော့ အားပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ.
Official Poster တောင် မထွက်သေးပေမယ့် အားလုံးရဲ့ အာရုံစိုက်တာ ခံနေရတာကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် ကောင်မလေး Bridget Jones ပါပဲ.
ဒါပေမယ့် တတိယမြောက် နောက်ဆက်တွဲကားထဲမှာ ချစ်ရမှာကတော့ သူတင်မကပဲ သူ့ရင်သွေးလေးပါ ပါနေမှာဆိုတော့ နှစ်ဆတိုးပြီး ချစ်နိုင်တော့မှာပါ
သမန်း ၀ံပုလွေတွေ၊ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေအကြောင်းကို သွက်လက်တဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အောင်မြင်စွာ ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Underworld ရဲ့ ပရိသတ်တွေ စောင့်စားနေကြတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ နံပါတ် ၅ ဇာတ်ကား ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
သိမ်မွေ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကြားက Jack Reacher ရဲ့ ရုန်းကန်ဖြေရှင်းပုံတွေက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်..
ဒီနောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားမှာလည်း ဘယ်လို အန္တရာယ်မျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရဦးမလဲ ဆိုတာကိုတော့…
Batman V Superman : Dawn of Justice ကို အကြည့်ချင်ဆုံး..
ငါတော့ မာဘယ်လ်ကားတွေ သိပ်သဘောမတွေ့တော့ဘူး
Batman V Superman က DC က…
DC ကဇာတ်လမ်းတွေကို နည်းနည်း ပိုပြီး dark ဖြစ်သလားလို့…း)
သေချာတာကတော့ ကွန်ဖူးပန်ဒါ၊ နင်ဂျာ နဲ့ အိုက်စ်အေ့စ် ကိုအရင်ဇုံးကျိဖစ်မှာဘာ
ကွန်ဖူးပန်ဒါ အိုက်စ်အေ့စ် နယူနိုက်ဘိုး
ဒေါက်တာ စထရိမ့်(ချ) မပါသေးဘူး
အချစ်လေး သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကားလေ။
ဟုတ်လား ကျန်ခဲ့တာ နေမယ်
Kung Fu Panda3– စောင့်မယ်။
Crouching Tiger, Hidden Dragon : Sword of Destiny စောင့်မယ်။
London Has Fallen မက်လုံးစိမ်းနဲ့ လူကြီးကို စောင့်မယ်
The Divergent series : Allegiant ဂျိမ်းသရို ကိုစောင့်မယ်
Batman V Superman : Dawn of Justice ဘင်အက်ဖလက်ကိုမကြိုက်သော်လည်း ကြည့်ကောင်းမဲ့ကားလို့ ယုံတယ်။
Captain America : Civil War – ၂ ယောက်လုံးကို မကြိုက်လည်း ကြည့်ဖြစ်အူးမယ်
Now You See Me2ဂျေချောင်းအမူအရာကြီးတော့မကြိုက်။ ကြည့်ဖြစ်မယ်။
Star Trek Beyond – ဒီ ကားမကြည့်ခင် Star Trek Into the Darkness အရင်ကြည့်မယ်။ အချစ်လေးပါလို့
Ice Age : Collison Course စောင့်မယ်
Bourne5အရမ်းကိုကြိုဆိုတယ်။ မက်ဒေမွန်ပြန်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်။
Bridget Jones’s baby – အရင်ကားကို ပြန်ကြည့်အူးမယ်။ အာ့မိုးကားတွေမကြည့်ဖြစ်။ ဒီ စာအုပ်တော့ ဖတ်ပြီးပြီ။
Underworld5မင်းသမီးကို အရမ်းကြိုက်လို့ ကြည့်မယ်။
ကျန်တဲ့ ကားတွေ မီကြိုက်။
New Neighbors မကြိုက်ဘူးလား ပထမကားတုန်းက အရမ်းရီရတယ်။
အမက ဟာသကားတို့ အချစ်ကားတို့ မကြည့်တာများတယ်။
မကြုံရင် တကူးတက ရွေးမကြည့်ဘူးး
Zec Fron ဆိုလား မင်းသားချောချောလေးလေ The Lucky One ထဲက
High School musical ကားတွေတော့ ကြည့်ဖူးတယ်။
နေဘား ရော နောက်တကားရော လက်ထဲရှိတယ်။
သူအရမ်းမိုက်တာတယ် ကြည့်ကြည့် နံပါတ်တစ်ကားပြန်ကြည့်ကြည့်